Hevitra handravahana ny tranonao amin'ny piano lehibe | Bezzia
Maria vazquez | 11/10/2021 20:00 | fanaka
Mitendry piano ianao? Misy olona ve mianatra mianatra mitendry zavamaneno ity? Raha izany dia mety manana ianao rindrina piano ao an-trano. Izy ireo no be mpitia indrindra ary misy antony roa manery an'izany: kely kokoa ny toerana alainy ary mora kokoa noho ny piano lehibe.
Grand piano dia kanto tokoa saingy takian'izy ireo ny fananana toerana lehibe handraisana azy ireo ao an-trano. Raha tsy olana aminao izany, dia manome hevitra anao izahay anio handravahana ny tranonao amin'ny piano lehibe ary hamboaranao tsara, amin'ny fomba haingon-trano.
2 Ny toerana tsara indrindra
2.1 Eo akaikin'ny varavarankely ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny
2.2 Manaraka ny tohatra
2.3 Amin'ny habaka manokana
Ny piano lehibe mainty izy ireo no be mpitia indrindra. Izy ireo no azontsika atao matetika ao an-trano sy ireo izay miasa ho fitaovana amin'ny kaonseritra sy ny recital. Tena kanto izy ireo, tsy azo lavina. Na izany aza, tsy izy ireo ihany no safidy hafa; Azonao atao ihany koa ny miloka amin'ny piano grand brown sy fotsy handravaka ny tranonao.
Toy ny mahazatra rehefa miresaka momba ny loko isika, ny fisafidianana ny tsara dia hilalao ho antsika raha ny fahatratrarana fomba manokana ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny. Ny pianô lehibe mainty dia tafiditra amin'ny tontolo iainana, na izany aza, raha te hanome ny efitrano fomba ankehitriny sy milamina sy voajanahary ianao, piano volontsôkôlà mety ho lasa mpiara-dia aminao tsara indrindra io. Ary ny kendrena? Ny fotsy dia tototry ny toetrany ary mifanaraka tanteraka amin'ny tontolo maoderina sy zavakanto.
Ny toerana tsara indrindra
Ny efitrano fandraisam-bahiny Matetika io no toerana mahazatra hametrahana piano lehibe, satria io no efitrano lehibe indrindra ao an-trano. Ny iray amin'ireo fahasahiranana mahazatra amin'ny fanaingoana trano misy piano lehibe dia matetika ny tsy fahampian'ny habaka, noho izany dia sarotra fa raha tsy mahita toerana ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny isika dia afaka manao azy amin'ny efitrano hafa. Saingy io ihany ve no solony? Tsia mazava ho azy.
Eo akaikin'ny varavarankely ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny
Raha ny hametraka ny piano lehibe ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny no hevitrao dia mitadiava toerana ho azy akaikin'ny varavarankely. Noho izany, azonao atao ny manararaotra ny hazavana voajanahary rehefa te hitendry piano ianao. Mametraha rug mafana eo ambanin'ny piano, jiro maoderina eo amboniny, ary sary vitsivitsy eo amin'ny rindrina hamoronana ensemble manintona sy kanto.
Ianao koa dia mila seza hilalaovana piano ary seza na pouf ahazoana aina raha misy te hipetraka hihaino anao. Raha amin'ity habaka ity na eo akaikiny io dia azonao atao koa ny mampiditra talantalana asa, azonao atao ny mametraka ny bokinao sy ny isa rehetra ao aminy.
Manaraka ny tohatra
Amin'ny trano lehibe misy tohatra afovoany ary toerana malalaka manodidina ireo, azonao atao ny manararaotra izany hametrahana ny piano. Izy io dia safidy tsara hafa hamenoana toerana iray izay an'ny hall na efitrano fandraisam-bahiny mazàna ary tsy mora foana ny manaingo azy.
Ny tohatra mahafinaritra sy ny rindrina madio no ilainao hahitanao endrika tsara ny piano malalanao. Iray amin'ireo hevitra handravahana piano ny tranonao io. sophisticated sy manokana, mazava ho azy. Io no zavatra voalohany hitan'ny vahininao rehefa raisinao an-trano izy ireo.
Amin'ny habaka manokana
Manana a efi-trano kely na efitra kely ao an-trano? Ity dia mety ho lasa toerana lavorary hipetrahana ny piano lehibe sy ny famerenana. Tsy mila ho lehibe be ianao; Tsy mila toerana ho an'ny piano fotsiny ianao, seza sy fitehirizana roa hitehirizana ireo boky sy mozika ravinao.
Raha manana habaka hanovana azy ho efitrano piano ianao ny idealy dia ny tsy mahazaka feo azy. Azonao atao koa ny manao fanazaran-tena araka izay tadiavinao nefa tsy "manelingelina" ny mpianakavy hafa na tsy manelingelina. Afaka mifantoka amin'ny piano ianao. Na dia mila fanamafisam-peo tsy misy feo aza ianao mila mifantoka. Ary sarotra ny mifantoka amin'ny habakabaka raha mangatsiaka sy tsy ilaina.
Mametraha karipetra eny amin'ny habakabaka, seza misy sandry, sekretera kely -Raha manoratra mozika anao manokana ianao- ary mikarakara ny jiro, indrindra raha tsy manana fidirana hazavana voajanahary ianao. Atambaro ny jiro ankapobeny amin'ireo iray akaiky kokoa izay mamela anao hahatratra tontolo iainana samihafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Decor » fanaka » Hevitra handravahana ny tranonao amin'ny piano lehibe